Ukusebenza ngeeNkqubo eziLinganayo zoLungelelwano oluNgcono
Amanani alinganayo ziinkqubo zokulingana ezinezisombululo ezifanayo. Ukuchonga nokuxazulula ukulingana okulinganayo yikhono elixabisekileyo, kungekhona kwinqanaba le- algebra kuphela , kodwa nakwimpilo yemihla ngemihla. Khangela imizekelo yemilinganiselo elinganayo, indlela yokuyicombulula ngayo enye into okanye iinguqu ezininzi, nokuba ungasebenzisa njani ubu buchule ngaphandle kweklasi.
Ukulingana okulinganayo kunye noTshintsho olulodwa
Imizekelo elula yezilinganiso ezilinganayo ayinayo nayiphi iinguqulelo.
Ngokomzekelo, ezi zilinganiso ezintathu zilingana:
Ukuqaphela ezi zilinganiso zilingana, kodwa kungabalulekanga. Ngokuqhelekileyo ingxaki elinganayo yokulinganisa ikucela ukuba ulungise ukuguquguquka ukuze ubone ukuba kuyafana ( ingcambu efanayo) njengenye kwenye i-equation.
Ngokomzekelo, izilinganiso ezilandelayo zilingana:
Kwiimeko zombini, x = 5. Siyazi njani oku? Ungayisombulula njani le "equx" -2x = -10 "? Isinyathelo sokuqala kukufunda imithetho yemilinganiselo efanayo:
Ukongeza okanye ukususa inani elifanayo okanye ibinzana kumacala omabini e-equation livelisa i-equation equation.
Ukuphindaphindwa okanye ukwahlula amacala omabini alinganayo ngenani elilinganayo elingenani livelisa i-equation equation.
Ukuphakamisa amacala omabini kumanqanaba angatshatangayo okanye ukuthatha ingcambu efanayo engavaliyo kuya kuvelisa i-equation equation.
Ukuba amabini omabini alinganayo awananto , ukuphakamisa amacala omabini alinganayo kwanegunya okanye ukuthatha into efanayo kunye neengcambu kuya kunika i-equation equation.
Ukubeka le migaqo ukusebenza, qinisekisa ukuba ngaba ezi zibini zilinganayo:
Ukuyicombulula oku, kufuneka ufumane "x" kwisabelo ngasinye . Ukuba "x" iyafana nazo zibini zombini, ngoko zilingana. Ukuba "x" iyahluke (oko kukuthi, iibalo zineengcambu ezahlukeneyo), ngoko ulinganiso alufani.
x + 2 - 2 = 7 - 2 (ukususa amacala omabini ngamanani afanayo)
2x + 1 - 1 = 11 - 1 (ukususa amacala omabini ngamanani afanayo)
2x / 2 = 10/2 (ukwahlula amacala omabini alinganayo ngenani elifanayo)
Ewe, ukulinganisa amabini kufanelana ne x = 5 kwimeko nganye.
Ungasebenzisa ukulingana okulinganayo kwimpilo yemihla ngemihla. Kunceda kakhulu xa uthengisa. Umzekelo, uthanda ihembe elilodwa. Enye inkampani inika i-shirt ye-$ 6 kwaye ine-$ 12 yokuthunyelwa, ngelixa elinye inkampani inika i-shirt engu-7.50. Yiyiphi imoto enexabiso elihle? Zingaphi iikhempe (mhlawumbi ufuna ukuzifumana kubahlobo) ngaba kufuneka uthenge ukuba ixabiso lilingane nazo zombini iinkampani?
Ukuyicombulula le ngxaki, vumela "x" ibe yinani leekhati. Ukuqala, setha x = 1 ukuthengwa kwephepha elilodwa.
Kwinkampani # 1:
Ixabiso = 6x + 12 = (6) (1) + 12 = 6 + 12 = $ 18
Kwinkampani # 2:
Ixabiso = 7.5x + 9 = (1) (7.5) + 9 = 7.5 + 9 = $ 16.5
Ngoko ke, ukuba uthengela enye yekhati, inkampani yesibini inikeza intsebenzo engcono.
Ukuze ufumane iphuzu apho amanani alinganayo, vumela "x" ihlale inani lemikhati, kodwa wabeka amanani amabini alinganayo omnye komnye. Sombulula ukuba "x" ukufumana ukuba zingaphi iikhati oza kuthenga ngazo:
6x - 7.5x = 9 - 12 ( ukukhupha amanani afanayo okanye amagama avela kwicala ngalinye)
1.5x = 3 (ukwahlula ngamacala amabini ngamanani alinganayo, -1)
x = 3 / 1.5 (ukwahlula ngamacala omabili ngo-1.5)
Ukuba uthenge iikhati ezimbini, ixabiso lifanayo, kungakhathaliseki ukuba uyifumana phi. Ungasebenzisa iimatriki ezifanayo ukufumanisa ukuba iyiphi inkampani inika into engcono kunye neentlawulo ezinkulu kunye nokubala ukuba uza kusindisa phi usebenzisa enye inkampani ngaphaya komnye. Yabona, i-algibra iyayiluncedo!
Ukulingana okulinganayo kunye neenguqu ezimbini
Ukuba unamabini amabini kunye namabini angaziwa (x no-y), unokubona ukuba ngaba iiseti ezimbini zokulingana okulinganayo zilingana.
Ngokomzekelo, ukuba unikwe ukulingana:
Unokwazi ukuba ngaba inkqubo elandelayo ilingana:
Ukuyicombulula le ngxaki , fumana "x" kunye "y" kwinkqubo nganye yokulingana.
Ukuba ixabiso lilinganayo, ke iifom zokulinganisa zilingana.
Qala ngesethi yokuqala. Ukuxazulula ukulinganisa amabini kunye neziguquko ezimbini, ukuhlukanisa iinguqu enye kunye nokucoca isisombululo sakho kwenye i-equation:
x = - (15 - 12y) / 3 = -5 + 4y (iplagi kwi "x" kwi-equation yesibili)
Ngoku, iplagi "y" ebuyela kwi-equation ukusombulula "x":
Ukusebenza ngale ndlela, ekugqibeleni uza kufumana x = 7/3
Ukuze uphendule lo mbuzo, unokusebenzisa imigaqo efanayo kwiseti yesibini yokulingana ukuze usombulule "x" kunye "y" ukuze ufumane ewe, ngokwenene, iyalingana. Kulula ukugqitywa kwi-algebra, ngoko yinto efanelekileyo ukujonga umsebenzi wakho usebenzisa i-solver solver inthanethi.
Nangona kunjalo, umfundi ohlakaniphile uya kujonga iiseti ezimbini zee-equation ngaphandle kokukwenza nayiphi na izibalo ezinzima ! Ukwahlukana kuphela phakathi kwe-equation yokuqala kwisethi nganye kukuba owokuqala unamathuba amathathu okwesibini (elilinganayo). Ulinganiso lwesibini lufana ngokufanayo.
UAbraham noIsake - Inkcazo yeBhayibhile
Indlela Yokuwubonisa Umzobo
Imithandazo Yonke Amathuba
Umbulali waseBerit Beck
Izixhobo zamatye kunye neziGaba zeTywala